अर्का घुस काण्डको भिडीयो �एन्टी करप्सन�ले खिचिदियो को हुन् सञ्जय झा ?
काठमाडौं । शक्ति भएपछि जुक्ति जताततैबाट जुर्छ भन्ने उक्तिको चरितार्थ गर्न अग्रसर भएका छन्, नेपाल प्रहरीका डीएसपी राजकुमार बैदवार । उनले आर्थिक चलखेलकै कारण महानिरीक्षक कुवेर सिंह रानाको कार्यनीतिलाई समेत ओझेल पार्ने अन्तिम पर्खाइमा छन् । सुन्नमा आएअनुसार उनको दुई महिना नबित्दै आकर्षक र कमाउ इलाकामा काज सरुवा हुँदैछ । सुगमका लाई दुर्गम र दुर्गमकालाई सुगममा तथा इन्चार्जलाई ट्वाइसी र ट्वाइसीलाई इन्चार्जमा सरुवा गर्ने,
डीएसपी बैदवारको यत्रो तागत ? दुई महिना नबित्दै आकर्षक र कमाउ इलाकामा काज सरुवा गराउन दौडधुप
ठमेलको फेसेज बारमा ग्याङफाइट, तोडफोड गर्ने १५ पक्राउ, पुलिसले ६ लाख माग्यो
काठमाडौं । गत शुक्रबार जाँड पिएर �गुड फ्राइडे� मनाइरहेकाहरु एकाएक आतंकित बन्न पुगे । कारण थियो� ग्याङ फाइट । प्रहरीले बाह्र बजेभित्रै रेष्टुरेन्ट बन्द गर्न निर्देशन दिए पनि उक्त निर्देशनको उल्लंघन गर्ने मध्येको एउटा �फेसेज� बारमा गत शुक्रबार रात ी सवा २ बजे उक्त रेष्टुरेन्टकै सञ्चालक राम गिरी जो आफूलाई काभ्रेली समूहको बताउने गर्छन् र चरी ग्याङका नाममा राजधानीमा चर्चीत डन समूहबीच हानाहान भएको हो । रेष्टुरेन्ट सञ्चालक गिरीले कुनै बेला चरीका सहयोगीमाथि कुटपिट गरेको विषयमा निहुँ खोज्न स्वयम् चरी पनि शुक्रबार मध्यराती फेसेज बारमा पुगेका थिए ।
जनताको पैसा ठगेर सहकारीका सञ्चालक टाप पूर्व सभामुख रानाभाटका छोरी�ज्वाइ�को पनि उही हालत
काठमाडौं । च्याउ सरी खुलेर कयौं जनताको ससानो पूँजीसहित टाप कस्ने सहकारी संस्थाका क्रियाकलापमाथि राज्यले समयमै ध्यान दिननसक्दा कालीमाटीको परिदृश्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पदाधिकारीले पनि पाँच करोड बढी कयौं सर्वसाधारणको निक्षेप लि एर फरार भएका छन् । खोजतलासलाई प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त संस्थाका अध्यक्ष रामबहादुर बस्नेत, उपाध्यक्ष बासुराज दाहाल, कोषाध्यक्ष दामोदर बस्नेत, सचिव केदार राय र सदस्य मिनबहादुर बस्नेतले उक्त पूजिँ लिएर टाप कसेका हुन् ।
बढ्न थाल्यो सिपाही हवलदारको मनोबल विमानस्थलका डीआईजीद्वारा सईमाथि रामधुलाई
काठमाडौं । सुन र विदेशी मुद्रा तस्करीमा स्वयम् प्रहरी नै संलग्न रहेको तथ्य बाहिर आएपछि तस्करीको जालो तोड्न खटिएका डीआईजी विज्ञानराज शर्माले विमानस्थलमै कार्यरत एक सईमाथि रामधुलाई गर्नुका साथै घुस लिएको रकम खल्तीबाट पर्समा नहाल्दै फिर्ता गराएका छन् । हवलदार र असईलाई प्रयोग गर्दै विदेशी मुद्रा पास गर्ने गरेको अभियोगमा एसएसपी रविराज श्रेष्ठ नै निलम्वनमा परेको काण्डपछि विमानस्थलका इमानदार सिपाही�हवलदारको बल्ल मनोबल बढ्न थालेको छ । इमानदारीताका साथ ड्यूटी निर्वाह गर्दा हाकीमले नै बद्मासी गरेको पत्तो पाएपछि विमानस्थलमा कार्यरत एक हवलदारको सूचनाका आधारमा डीआईजीले ती सईमाथि रामधुलाई गरेका हुन् ।
गृहमन्त्रीका पिएद्वारा प्रहरीमाथि दूब्र्यबहार गल्ती देखिए कारवाही हुने डीआईजीको भनाइ
काठमाडौं । गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार अन्तराष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)को बैठकमा सहभागी हुन इटाली गएका बेला यता उनका पिएले भने जाँड आतंक मच्चाएका छन् । मन्त्री विदेश भ्रमणमा रहेका बेला मनोरन्जन गर्न विरगन्ज पुगेका पिए कन्हैया ठाकुरले रात्री चेकजाँचका लागि ड्यूटीमा बसेका प्रहरीमाथि दूब्र्यबहार गरेका हुन् । आइतबार राती विरगन्जको आदर्शनगरस्थित कैलाश होटल नजिकै नियमित चेकजाँचमा रहेका नेपाल प्रहरीको विशेष कार्यदल (एसटीफ) का प्रहरीसँग �म गृहमन्त्रीको पिए, मलाई नचिनेको ?� भन्दै विवाद गरेका थिए । साथी विक्की गुप्तासँग होटल नजिकै कुरा गरीरहेका बेला चेकजाँचका लागि खटिएको प्रहरीसँग विलवुकको प्रसंगमा विवाद भएको हो ।
दुबै आईजीपी च्यापेर गृहमन्त्री बेलुकी इटाली जाँदै इन्टरपोल महाशाखामा नेपालका मुद्दा के होलान् ?
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) को ८१ औं महासभामा सहभागी हुन गृहमन्त्री विजय कुमार गच्छदार तथा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक कुवेर सिंह राना र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक कोषराज वन्त आज बेलुकी अवेर कतार एअरलाइन्स मार्फत् दोहा हुँदै इटालीको रोम प्रस्थान गर्दैछन् । सामान्यतया प्रहरी महानिरीक्षकले मात्रै सहभागिता जनाउने उक्त वैठकमा यसपटक गृहमन्त्री गच्छदार पनि सहभागी रहने छन् । उनी आउँदो २० गते हुने मन्त्रीस्तरिय वैठकमा मात्रै सहभागी रहने बताइएको छ ।
खेलको साइनो दलाली धन्दा उमेश शेरचनलाई फाइदैफाइदा
काठमाडौं । राजधानीमा दुःख गर्नेहरुलाई दुखैदुख छ भने सुख खोज्नेहरुले सुख पनि पाएकै छन् । अझै ठगी गर्ने, दलाली गर्नेहरुका �रामकहानी� त लेखेरै साध्य छैन । यस्तै दलाली पेशाले फलीफाप भएका मध्येका एक हुन्, बागलुङको वुर्तिवाङ घर भई बुटवलमा झरेर त्यहाँ केही समय �चोरीका गाडी�को धन्दा गर्दै राजधानीमा �दलाली�मा पोख्त उमेश शेरचन । उमेश शेरचनसँग एक पटक परिचय गरेर छुटेकाहरुले उनलाई �विवादास्पद�का रुपमा चिन्छन् भने भर्खरै सम्वन्ध गाँस्दै गरेकाहरुले उनलाई �सोझो� र �भद्र�का रुपमा बुझ्ने गर्छन् ।